अन्तराष्ट्रिय – SawalNepal
एजेन्सी । माछा मार्न गएका जिम्बावेका एक माझीको गोहीले लिङ्ग खाई दिएपछि मृत्यु भएको छ । केही दिन अघि ऐलेडाले स्थिति फार्म नजिकै माछा मारिरहेका जिम्बावेका नागरिक पल न्यामहान्जाको गोहीले लिङ्ग खाइ दिएपछि मृत्यु भएको हो । पल न्यामहान्जा हरारेको होप्लेका भन्ने ठाउँका वासिन्दा रहेका छन् । स्थानीय संचारमाध्यमका अनुसार गोहीले उनको लिङ्गनै टोकेर
बीबीसी। एक रिपोर्टका अनुसार उत्तर कोरियाका हजारौं युवतीलाई चीनमा देह व्यापार गर्न बाध्य पार्ने गरिन्छ। लन्डनस्थित ‘कोरिया फ्यूचर इनिशिएटिभ’ को रिपोर्टमा उत्तर कोरियाली महिला र युवती अपहरण गरेर वेश्याका रुपमा बेच्ने गरेको उल्लेख गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। उक्त रिपोर्टमा ती महिला तथा युवतीलाई चिनियाँ पुरुषसँग विवाह गर्न पनि बाध्य पारिने गरेको उल्लेख छ। रिपोर्टका
काठमाडौँ । बंगलादेश सरकारले ६५ दिनका लागि माछा पार्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। माछाको भण्डारणमा सन्तुलन ल्याउन भन्दै बंगलादेशको सरकारले ६५ दिनका लागि माछामा प्रतिबन्ध लगाएको हो। सबै प्रकारका माछा मार्ने जहाजमा प्रतिबन्ध लगाईएको बंगलादेशको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम जनाएको छ। उनीहरुले अरु आम्दानीको स्रोत नभएको बताएका छन् । प्रतिबन्ध २० मेदेखि २३ जुलाईसम्म
ब्राजिल । आइतबार अपराह्न एक समूहले गोली चलाउँदा कम्तीमा ११ जनाको ज्यान गएको छ । स्थानीय प्रहरीका अनुसार उक्त गोलीकाण्डमा अरु एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । ब्राजिलको उत्तरी प्रान्त पारामा स्थानीय समय अनुसार अपराह्न ४ बजे सात जना बन्दुकधारी बेलेम शहरको गुआमामा रहेको एक बारमा प्रवेश गरी गोली चलाएका थिए । हत्या भएकाहरुमा
काठमाडौँ । गुगलले चिनियाँ मोबाइल कम्पनी ह्वावेईसँगको व्यापार सीमित पार्दै ह्वावेईलाई उसका मोबाइल सेवाहरूबाट वञ्चित गरिदिएको बताएको छ। यसको अर्थ ह्वावेईले अब गुगलको प्राविधिक सहायता पाउनेछैन र उसका नयाँ स्मार्टफोनहरूले लोकप्रिय गुगल एप तथा सेवामा पहुँच पाउने छैनन्। गुगलका एक प्रवक्ताले कुरा गर्दै अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वीकार गर्ने क्रममा गुगल रहेको बताए। रोयटर्स
काठमाडौं । अमेरिकामा एक गर्भवती महिलाको हत्या गरि उनको पेटमा रहेको वच्चा चोरिएको छ । संसारकै सबैभन्दा शक्तिसम्पन्न राष्ट्र मानिने अमेरिकामा पनि यस्तो विभत्स तरिकाले हत्या हुँदो रहेछ भनेर कल्पना पनि गर्न सकँिदैन । १९ वर्षकी गर्भवती युवती मार्लेना ओचालो लोपेजलाई बच्चालाई काम लाग्ने केही सामान दिने बहानामा क्लारिसा फिग्युरोआ नामक महिलाले आफ्नो घरमा बोलाएर
लण्डन । बेलायतको संसद भवनमा प्रयोग भएको कण्डम भेटिएपछि हँगामा भएको छ । बेलायती संसदमा प्रयोग गरिएको कण्डम नै फेला परेपछि हंगामा नै मच्चिएको हो । सन्डे टाइम्सले जनाएअनुसार सांसदहरू संसदमा प्रयोग भएको कन्डम बोकेर आउने गरेको खुल्न आएको छ । यो खुलासा उक्त कार्यालयमा सरसफाईको काम गर्ने कामदारहरूले गरेका हुन । उनीहरूका अनुसार ब्रिटेन
होन्डुरसको रोटान द्वीपमा विमान दुर्घटना ५ जनाको मृत्यु
होन्डुरस– होन्डुरसको रोटान द्वीपमा एउटा सानो बिमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चार जना क्यानाडेली पर्यटक र एक जना अमेरिकी पाइलटको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार रोटानको विमानस्थलबाट उडेको केही मिनेटभित्रै उक्त विमान डिक्सन कोभ शहर नजिक दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । मृत्यु हुनेहरुमा ब्राड्ली पोस्ट, बेली सोनी, टमी डब्लर तथा पाइलटद्वय प्याट्रिक फोरसेठ र एन्थोनी
एजेन्सी । यहाँ मसाज गराईन्छ’ बोर्डमा लेखिएको हुन्छ । मसाज गराउनका निम्ति ग्राहक काउन्टरसम्म पुग्छन् । त्यसपछि महिला होस् या पुरुष स्वागतका निम्ति आउने गर्दछन् । पानी पिउन दिईन्छ । त्यसपछि सोध्ने गरिन्छ भन्नुहोस् सर कस्तो मसाज गर्ने ? थाई, स्वीडिश, डिप टिश्यू अर्थात् ट्रिगर आदि आदि । दर्जनौँ मसाजका विकल्प प्रस्तुत गरिन्छन् ।
लोकसभा चुनावको प्रचार प्रसार सकिएपछि मोदी गुफा पसे पछी !
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ध्यान गर्नका लागि भन्दै गुफा पसेका छन् । शुक्रबार लोकसभा चुनावको प्रचार प्रसार सकिएपछि उनी शनिबार बिहानै उत्तरखण्डमा पुगेका थिए । तीर्थस्थल केदारनाथको दर्शन गरिसकेपछि उनी ध्यान गर्नका लागि एक पवित्र गुफामा पसेका हुन् । प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीको यो चौथो केदारनाथ भ्रमण हो । उनको तस्बिर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा सार्वजनिक भएपछि विभिन्न